Dhawell.hlugalay အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Dhawell.hlugalay အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Dhawell.hlugalay အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ပိုဟောင်းသော ၅၀ ခု) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
၀၃:၅၁၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၇၆‎ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ‎ →‎စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ
၀၃:၂၂၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၄၀‎ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ‎ အချက်အလက်ထပ်ဖြည့်
၀၃:၀၈၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၈၈‎ အရေးမကြီး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ‎ add ref
၀၂:၂၈၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆၁၅‎ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ‎ add ref
၀၁:၅၅၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၇၇‎ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ‎ add ref
၀၆:၁၁၊ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၇၂‎ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ Added linked to verified (blue-marked) facebook page of the organization
၀၁:၂၈၊ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ typo fix
၁၁:၅၂၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၅၁‎ အရေးမကြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ ကြေငြာချက် အညွှန်း
၁၁:၄၅၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၉‎ အသစ် CRPH ‎ Alias လက်ရှိ စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၁:၄၄၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ .
၁၆:၄၂၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၆၇‎ အရေးမကြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ Added interwiki link and reference
၁၆:၁၄၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၉‎ အသစ် CPRH ‎ Alias လက်ရှိ စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၆:၁၂၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၆၂၃‎ အသစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ‎ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ
၁၆:၃၉၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆၄၀‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ‎ →‎လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရန် နည်းစနစ်များ
၁၂:၃၉၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎အီဂျစ်နိုင်ငံ
၁၂:၃၇၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၁၅၀‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎အီဂျစ်နိုင်ငံ
၀၉:၃၇၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၆၆‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ
၀၉:၂၈၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅၂၆‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ
၀၈:၅၃၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅၅၇‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎ကျူးဘားနိုင်ငံ
၀၈:၅၁၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅‎ အရေးမကြီး အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ →‎ကျူးဘားနိုင်ငံ
၀၈:၄၉၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၄၁၁‎ အသစ် အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ‎ Content in this edit is translated from the existing English Wikipedia article at en:Examples of civil disobedience; see its history for attribution.
၀၈:၄၇၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃၂‎ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ‎ "အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ" ရည်ညွှန်းကိုထည့်။
၁၀:၄၄၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂၈‎ တမ်းပလိတ်:PD-notice ‎ ဘာသာပြန်။ လက်ရှိ
၁၀:၃၇၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၈၃‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:PD-notice ‎ Ported in en:Template:PD-notice Ver: 17:02, 23 February 2018‎; see its history for attribution.
၀၀:၁၇၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Bixa ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၀၀:၁၅၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Bixaceae ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၃၄၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Calidris ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၃၀၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Glareola ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၂၈၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Glareolinae ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၂၆၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Glareolidae ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၂၁၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Rostratula ‎ Linked to enwiki article
၁၅:၀၆၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Rostratulidae ‎ Linked to enwiki article စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၅:၀၃၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၇‎ အရေးမကြီး တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Lymnocryptes ‎ Linked to mywiki article လက်ရှိ
၀၉:၀၂၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂‎ အရေးမကြီး အာရ် (အက္ခရာ) ‎ 37.111.0.51 (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 640539 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၀၉:၀၁၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀‎ အရေးမကြီး အာရ် (အက္ခရာ) ‎ 37.111.0.51 (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 640540 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၀:၃၁၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၃၁၄‎ တိုဇင်နမရန်း ‎ Infobox ထည့်။ လက်ရှိ
၁၀:၃၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၅၇၀၆‎ တမ်းပလိတ်:Infobox drug ‎ Ported in en:Template:Infobox drug Ver: 04:41, 20 November 2020‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၃၇၄‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/maintenance categories ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/maintenance categories Ver: 09:03, 18 November 2020‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၈၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၃၂‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatCompTox ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatCompTox Ver: 19:57, 27 April 2019‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၇၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၇၀‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatPDBligand ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatPDBligand Ver: 11:08, 27 October 2020‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆၅‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChemDBNIAID ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatChemDBNIAID Ver: 16:30, 23 February 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂၇‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChEMBL ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatChEMBL Ver: 04:12, 23 November 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၄၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂၄‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChEBI ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatChEBI Ver: 05:41, 23 November 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၂၃၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈၂‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatKEGG ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatKEGG Ver: 09:34, 12 April 2020‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၁၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၅၉‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatUNII ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatUNII Ver: 00:27, 18 December 2020‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၀၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၇၁‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChemSpider ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatChemSpider Ver: 02:12, 23 November 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၀၈၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈၉‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatDrugBank ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatDrugBank Ver: 04:01, 23 November 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၀၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂၇‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatIUPHARBPS ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatIUPHARBPS Ver: 03:49, 23 November 2018‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၀၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၂၁‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatJmol ‎ Ported in en:Template:Infobox drug/formatJmol Ver: 17:28, 06 December 2019‎; see its history for attribution. လက်ရှိ
၁၀:၀၄၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၆‎ အသစ် တမ်းပလိတ်:Infobox drug/chemical formula ‎ Alias လက်ရှိ စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
တည်းဖြတ်မှု အကျဉ်းချုပ် ရှာဖွေရန်
ပရောဂျက်အားလုံး ပံ့ပိုးမှုများ / မှတ်တမ်း
SUL / အကောင့်များ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Dhawell.hlugalay" မှ ရယူရန်